Yusuf Garad oo loo magacaabay Safiirka Soomaaliya ee Qaramada Midoobay - iftineducation.com
Yusuf Garad oo loo magacaabay Safiirka Soomaaliya ee Qaramada Midoobay
iftineducation.com – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa lagu soo waramayaa inuu xilka Safiirka Soomaaliya u fadhiya UN-ta u magacaabay Yusuf Garaad Cumar oo horey usoo noqday madaxii laanta af Soomaaliga ee Idaacada BBC-da.
Inkastoo xafiiska Madaxweynaha uusan weli si rasmi ah arrintan u shaacin, balse Yusuf Garad ayaa u xaqiijiyey xilkan cusub ee loo magacaabay warbaahinta magaalada Muqdisho oo uu hada ku sugan yahay.
Safiir-CilmiWaxaa lagu wadaa in Yusuf Garaad uu bedali doono Diblumaasigii horey xilkaasi u hayey Dr.Cilmi Axmed Ducaale oo xilka Safiirka Qaramada Midoobay ee New York soo hayey muddo ka badan toban sano.
Xilkan loo magacaabay Yusuf Garaad ayaa ah xilkii ugu horeeyey ee Diblumaasi ah oo uu qabto.
Yuusuf Garaad oo siyaasada Soomaaliya soo dhexgalay sanadkii 2012 kadib markii uu isu sharaxay xilka Madaxweynaha ayaa muddooyinkii danbe ahaa la taliye dhanka saxaafada ee Madaxweyne Xassan Shiikh.
Galmada joogtada oo u fiican caafimaadkaaga wiilyahow badi